ကြက်သားတုံးများနှင့် Alfredo ခေါက်ဆွဲ - ကြော် | ကြော်တယ်။
ကြက်သားတုံးများနှင့် Alfredo ခေါက်ဆွဲ
Alicia tomero | 23/11/2021 10:00 | ချက်ပြုတ်နည်းများ, ကြက်သားနည်းနည်းများ
သင်သည် ခေါက်ဆွဲကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါက၊ ပြင်ဆင်ရန် ဤနည်းသည် ကွဲပြားပြီး ကွဲပြားသည်။ spaghetti တစ်ပန်းကန် ရိုးရာနှင့်စပိန်အရသာနှင့်အတူ။ မိသားစုတစ်ခုလုံး ကြိုက်နှစ်သက်စေမည့် လက်ရာမြောက်သောခေါက်ဆွဲပြင်ဆင်ရန် အခြားနည်းလမ်းကို သင်ရှာဖွေတွေ့ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကြက်သားတုံးကြော် သင်ဤစာရွက်၏နောက်ဆုံးရလဒ်ကိုကြိုက်လိမ့်မည်။
ခေါက်ဆွဲဟင်းလျာများကို ကျွန်ုပ်တို့လက်လွတ်မခံသင့်ပါ။ boletus နှင့်အတူ spaghetti ။
200 ဂရမ် spaghetti
ဂျုံမှုန့် 1 ဇွန်း
နွေးမြေတပြင်လုံးနို့ 250 ml
ခြစ်ဒိန်ခဲ 100 ဂရမ်၊ ပိုအားကောင်းလေ၊ ပန်းကန်ကိုပိုပြီးဇာတ်ကောင်ပေးလိမ့်မယ်။
လှီးထားသော လတ်ဆတ်သောနံနံပင် လက်တစ်ဆုပ်စာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ပမာဏများစွာကို အပူပေးသည်။ ဆားနှင့်ရေ။ ပွက်ပွက်ဆူလာတဲ့အခါ ငါတို့လောင်းမယ်။ spaghettis ပြီးတော့ သူတို့ညွှန်ပြတဲ့ မိနစ်တွေကို ချက်ပြုတ်ထားမယ်။ ပြီးသောအခါ၊ ငါတို့သည် သူတို့ကို စွန့်ပစ်၍ ဖယ်ထားလိမ့်မည်။
ငါတို့ဖြတ်ခဲ့တယ် ကြက်သားကိုအပိုင်းပိုင်း သို့မဟုတ် taquitos အသေးများ။ ဒယ်အိုးထဲတွင် သံလွင်ဆီအနည်းငယ်ထည့်ကာ ကြက်သားကိုထည့်ပါမည်။ ဆားထည့်ကာ ညိုလာပါစေ။ အဲဒါတွေပြီးရင် ကျွန်တော်တို့က ဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်။
ဒယ်အိုးထဲတွင် ဂျက်စော်သေးသေးလေးထည့်ပါ။ သံလွင်ဆီ လွှင့်ပစ်မယ်။ minced ကြက်သွန်ဖြူ အဆင်ပြေတယ်။ ညိုကြပါစေ။
ပြီးရင်တော့ ကြက်သွန်ဖြူ မကျက်ဘဲနဲ့ ဇွန်းကို ထည့်ပြီး မွှေပါ။ ဂျုံမှုန့် မုန့်ညက် မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် လှည့်ပေးပါမယ်။ အစိမ်းမှုန့်၏အရသာကိုဖယ်ရှားရန်ရှိသည်။
ငါတို့သွန်းတယ် နို့ ကောင်းစွာမွှေပေးပါ။ ပါးပါးနှင့် အတန်ငယ်ထူသော မုန့်စိမ်း. ကျွန်ုပ်တို့သည် အပူကိုလျှော့၍ ပေါင်းထည့်ပါ။ ပြီးလျှင်ဒိန်ခဲ. ငံပြာရည်ထဲ ကောင်းကောင်းထည့်နိုင်အောင် ဆက်ပြီး လှည့်သွားမှာဖြစ်ပြီး နောက်ထပ် နှစ်မိနစ်လောက် စောင့်ပြီး အပူထဲက ဖယ်လိုက်ပါ။
ငါတို့ပစ်လိုက်တယ် spaghetti ၏အပေါ်မှဆော့စ် ပန်းကန်ပြားထဲသွားတဲ့အခါ အပေါ်ကနည်းနည်းထည့်တယ်။ ကြက်ညှာ. အလှဆင်ရန်အတွက် အနည်းငယ်ခုတ်ထစ်ထားသော လတ်ဆတ်သော parsley ထည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ပြန်လည် » ချက်ပြုတ်နည်းများ » ကြက်သားတုံးများနှင့် Alfredo ခေါက်ဆွဲ
Macaroni နှင့် chorizo, ဖုတ်